Madaxweyne Deni oo dhegax dhigay dhismo lagu kordhiyey Bangiga Dhexe ee Puntland. - Awdinle Online
Madaxweyne Deni oo dhegax dhigay dhismo lagu kordhiyey Bangiga Dhexe ee Puntland.
March 3,, 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhiyey Bangiga Dhexe ee Dowlad Goboleedka Puntland.
Munaasabadda dhagax dhigga waxaa Madaxweynaha ku weheliyey Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud Gaadiidka iyo Guriyeynta, Axmed Bashiir Muuse, Maamulka Bangiga Dhexe ee Puntland iyo Injineerro ka socday shirkadda fulinaysa mashruucan.
“Runtii sharaf wayn bay noo tahay inaan kasoo qayb galo dhagax dhigga xafladaan iyada oo tilmmaam u ah isbedelka Dowladda Puntland ay tiigsanayso oo ay ugu horayso Hay’adaha dhinaca Maaliyadda ka shaqeeya iyo Horumarkooda Bangiguna uu yahay meesha ugu muhiimsan ee la rabo inay jihayso oo ay ka shaqayso” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni.
“Mashruucan waxaan rajaynayaa in uu sida loogu talo galay u fulo, wuxuuna tilmaan u yahay sida ay uga go’an tahay Dowladda Puntland in Hay’adaha Dowladda dib u habayn lagu sameeyo lana tayeeyo” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Gabagabadii Madaxwaynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdilahi Deni ayaa kormeeray xafiisyada kala duwan ee Bangiga Maamulka Waxaana uu kulan la qaatay Madaxa Bangiga dhexe ee Puntland.
Previous articlePuntland oo wajaheysa dhaqaalo xumo & Dekadda Boosaaso oo xiran
Next articleBooliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad Maxay yihiin ?